I-WOWOW Brush Nickel yoxinzelelo oluphezulu lweDual Shower Head Combo ene-Handheld kunye ne-59
Ikhaya / Shower Imibhobho / Iintloko zeshawari eziphathwayo / WOWOW ibhrashi yeNickel yoxinzelelo oluphezulu lweeDual Shower Head combo ene-Handheld kunye ne-59 ″ Hose
WOWOW ibhrashi Nickel Ingcinezelo High Dual Shower Head combo kunye aphathwayo kunye 59 ″ Hose
Izinto zeNkulumbuso I-nickel e-Brushed plated i-ABS ishawa, i-bracket kunye ne-59 ″ ye-PVC yokuhlambela i-hose, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukupeyinta ngomnwe simahla kwaye somelele. Amantongomane ombhobho oqinileyo obhedu onxibelelwano oluthembekileyo oluvuzayo.
Uyilo olwahlukileyo lweendlela ezi-3 zokuDibanisa amanzi -Iindlela ezi-3 zokutshintsha kwamanzi kunye ne-anti-swivel lock nut yenza kube lula ukutshintshela kwintloko yeshawa ukuya kwiishawa eziphathwayo okanye ukusebenzisa iintloko zeshawari zombini ngaxeshanye. Ikwafaka nesakhelo esakhelweyo ngaphakathi kwe-360 ° esine-adjustable bracket yesandla sokusetyenziswa kunye nokugcinwa kwentloko.
Shower nganye ine-7-Setting -I-4.5 intshi yentloko yentloko yeshawa, eyayibandakanya intloko yeshawa kunye nentloko yeshawa. Intloko nganye yeshawari yoxinzelelo oluphezulu ineesetingi ezi-7, iMvula, ukuPhulula umzimba, iSPA Massage, Ukutshiza amandla, iMvula + iSPA Massage, Imvula + yokuPhulula umzimba kunye nokuGcina amanzi. Unokukhetha ukusuka kuma-48 apheleleyo kunye nokudityaniswa kweepateni zokuhamba kwamanzi.
Ukufakwa lula -Akukho sidingo sokufowunela umntu owenza imibhobho ngemibhobho yamanzi, unxibelelanise nje ngesandla ngokuqinileyo ngemizuzu ngokulandela nje imiyalelo yenyathelo ngenyathelo. Ukusebenza nayo yonke imigangatho yemibhobho ye-G1 / 2. Qaphela: Kuqhelekile ukuva ilizwi xa uligungqisa njengoko kukho impeller kwintloko yeshawari enceda ukuvelisa amanzi okuphulula ngcono.
I-SKU: H5011 iindidi: Iintloko zeshawari eziphathwayo, Shower Imibhobho
9.21 x 9.17 x 3.86 intshi
I-Nickel eBhrashiweyo i-Premium ye-ABS, i-PVC Hose